Onye isi nke OnePlus kpughere na OnePlus 7 Pro ga-enwe nnukwu ihuenyo | Gam akporosis
Ndị na-emepụta ihe na-achọ ụzọ ha ga-esi dị iche na asọmpi ahụ, na OnePlus bụ otu n'ime ha.
N'oge a, onye nrụpụta ahụ na-etu ọnụ ihuenyo ọzọ OnePlus 7 Pro ga-agbanwe iwu nke egwuregwu ahụ. Na N'ajụjụ ọnụ pụrụ iche na verge, Pete Lau, onye isi ụlọ ọrụ ahụ, gosipụtara na ngwaọrụ ahụ ga-enwe nnukwu ihuenyo.
N'ajụjụ ọnụ ahụ, ndị isi ahụ gosipụtara na aha ekwentị abụọ a ga-ebido n'ọnwa ọzọ bụ OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro. Otú ọ dị, ọ bụ nanị ndị nke ikpeazụ ga-abịa na ihuenyo ọhụrụ a nke na-efu ha okpukpu atọ ego ọ na-emebu maka ogwe ngosi.
N'ezie, ngwaahịa ọhụrụ anyị ga - eji teknụzụ ngosi ọhụụ ọhụụ. Anyị etinyego ego nke ukwuu (teknụzụ bụ ego 3x nke ngosipụta ndị ọzọ) na imepụta teknụzụ naanị maka OnePlus, ahụmịhe ihuenyo nke kachasị mma n'ụwa. https://t.co/HVDhfI8uDA
- Pete Lau (@ nnetezie2007) April 22, 2019
Maazị Lau kpachara anya ka ọ ghara ịnye nkọwa ọ bụla na ihuenyo, ma kwuo na ọ juru ya anya na oge mbụ ọ hụrụ ya. Ihuenyo OnePlus 7 Pro ga - "kọwaa ngwa ngwa ma dịkwa mma" ma "dị oke mma ma dịkwa nkọ".
Ndị mmadụ na-ekwu otú ahụ ohuru panel nwere ume ume nke 90 Hz, nke dị ngwa karịa ọtụtụ ekwentị n'oge ahụ. OnePlus abụghị onye nrụpụta izizi ịmalite ekwentị na ọnụego ume ọhụrụ dị elu. Sharp, Razer, na ASUS enweworị ekwentị na ha repertoire na ngosipụta na ọnụego ume karịa 60 Hz. Ewezuga ASUS, ekwentị Sharp na Razer nwere ọnụego ume ọhụrụ nke 120 Hz.
Dị ka ọ dị na ekwentị ọhụrụ OnePlus, ndị a ga-adị oke ọnụ karịa ndị gara aga. Emeputa ga-ekwenye ndị na-azụ ahịa na mmụba ọnụahịa bara uru n'ezie.
Onye OnePlus 7, n'onwe ya, agaghị egosipụta ihuenyo ọhụrụ na leaked ụdịdị na-ekwu na ọ ga-ejigide 20W ngwa ngwa odori technology nke OnePlus 6T ọ ga-enwekwa kamera azụ abụọ. Versiondị Pro abụghị naanị ihuenyo ka mma, kamakwa nnukwu batrị, kamera azụ atọ, na nkwado ngwa ngwa 30-watt.
Pete Lau ga-ekwupụta ọkwa n'oge na-adịghị anya banyere ya. omume igba egbe ekwentị, nke a nụrụ kepu kepu banyere itinye na Mee 14.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » OnePlus CEO kpughere na OnePlus 7 Pro ga-enwe nnukwu ngosi